TIISHKA afka la isaga tiro ayuu ku saxiixay heshiiskiisii ugu horreeyay, 44-ilbiriqsi ayuu ku qaatay kaarka CAS kulankiisii ugu horreeyay ee Argentina..(Aqrsio waxyaabo aadan ka garaneyn Lionel Messi)+SAWIRRO iyo MUUQAAL – Gool FM
TIISHKA afka la isaga tiro ayuu ku saxiixay heshiiskiisii ugu horreeyay, 44-ilbiriqsi ayuu ku qaatay kaarka CAS kulankiisii ugu horreeyay ee Argentina..(Aqrsio waxyaabo aadan ka garaneyn Lionel Messi)+SAWIRRO iyo MUUQAAL
(Catalonia) 15 Juunyo 2016. Waxaa daaha laga rogay in xiddiga Lionel Messi uu heshiiskiisii ugu horreeyay ee Barcelona uu ku saxiixay TIISH warqada afka lagu tirtirto.
Waxaa la arkaa inaad wax badan ka garaneyso xiddiga reer Argentina ee 5-ta jeer ku guuleystay laacibka ugu fiican adduunka laakiin waxaan kuu heynaa arrinkan cusub iyo 6-waxyaabood oo kale oo aadan ka garaneyn Lionel Messi.
Xoghayihii guud ee Barcelona Charly Rexach ayaa aad ula dhacay Lionel Messi 7-daqiiqo uun kaddib tijaabadiisii isagoo 13-jir ah wuxuu doonay inuu durba la saxiixdo heshiis.
Goalaso.tv ayaa warinaya in wixii ugu dhawaa ee wax lagu qori karay uu ahaa markaa TIISHKA afka lagu tirtirto oo heshiiska looga saxiixay Messi.
Sawirka jirka (Tattoo) ee kaga sawiran lugta Bidix:
Xirfadiisa ayuu u huray, Messi ayaa kubbad (BANOONI) ku sawiray lugtiisa bidix, wuxuu sidoo kale dhabarkiisa ku sawiray wajiga hooyadiis ku darso wiilkiisa Thiago ayaa gacanta uga sawiran.
44-ilbiriqsi ayuu kaarka cas ku qaatay kulankiisii ugu horreeyay ee Argentina:
Wuxuu kaarka CAS ku qaatay Lionel Messi kulankiisii ugu horreeyay ee xulka Argentina 44-ilbiriqsi oo kaliya isagoo 18-jir ah, badel ayuu ku yimid ciyaarta daqiiqadii 63-aad kulan ay la ciyaarayeen xulka Hungary, laakiin durbadiiba waa laga saaray garoonka kaddib markii uu suxul ku dhuftay Vilmos Vanczak.
Messi oo wadadiisii marsiyay wiilkiisa Thiago:
72-saacadood uun kaddib dhlashada wiilkiisa Thiago oo iminka afar jir ah ayaa qandaraas looga saxiixay kooxda Newell’s Old Boys, waa isla kooxdii uu aabihii Messi ka soo bilaabay waayihiisa ciyaareed ee dhalinyaranimo 1994-tii.
Sheekada cajiibka ah ee ka dhexeysa wiilka Messi iyo midka Cristiano Ronaldo:
Xiddiga Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa 869-maalmood ka wayn Lionel Messi, waxaase yaab ah in wiilka Ronaldo ee Cristiano Ronaldo Junior uu isna 869-maalmood ka wayn yahay wiilka Messi ee Thiago.
Jaceyl ka soo bilaambay Caruurnimada:
Lionel Messi ayaa garanayay xaaskiisa, hooyada wiilkiisa ee Antonella Roccuzzo tan iyo markii uu shan jirka ahaa, waxay iskula soo koreen Rosario ee dalka Argentina.
EURO 2016: Faransiiska oo noqday xulkii ugu horreeyay ee iska xaadiriya wareega 16-ka…+SAWIRRO
HOR DHAC: Waqooyiga Ireland Vs. Ukraine